♦️ ( ၅၄ ) လမ်း အနီး အရောင်း ♦️
♦️ ( ၅၄ ) လမ်း အနီး အရောင်း ♦️ ♦️ S ( 931 ) ♦️ ပြည်ကြီးတံခွန် မြို့နယ် ♦️ ( ဘုရင့်နောင် x ဗန္ဓုလ ) ကြား ♦️ ပေ ( ၃၅ x ၄၀ ) , အရှေ့လှည့် ♦️ RC - (2) ထပ် , မူရင်းစလစ် ♦️ Master Room - ( ၂ ) ခန်း , Single Room - ( ၂ ) ခန်း ♦️သိန်း ( ၁၁၀၀ ) ...
~ Wide Sqft & Fair Price ~
~ Wide Sqft & Fair Price ~ 【Followed by English message】 ⏩ အိမ်ခြံမြေစာရင်းအမှတ် > ( RN - 12280 ) 🐶🐶 ရွှေဂုံတိုင်လမ်းအနီးက Pent House အရောင်းလေးနော်...... နေရာ - ဗဟန်း မြို့နယ် အဆောက်အဦးအမျိုးအစား - ကွန်ဒို အလွှာ - ၁၂ လွှာ (Pent ...
♦️ ဆိတ်ငြိမ်ရပ်ကွက် နေချင်သူများအတွက် အရောင်း ♦️
♦️ ဆိတ်ငြိမ်ရပ်ကွက် နေချင်သူများအတွက် အရောင်း ♦️ ♦️ S ( 991 ) ♦️ အောင်မြေသာစံ မြို့နယ် ♦️ ရေစစ်ကန်အနီး ♦️ ပေ ( ၅၀ x ၁၀၀ ) , တောင်လှည့် ♦️ RC ( ၁ ) ထပ် - ၁လုံး ♦️ နံကပ် ( ၂ ) ထပ် - ၁လုံး , ဂရန်မြေ ♦️ သိန်း ( ၈၇၀၀ ) ( ...
♦️ RC ( ၂ ) ထပ် အရောင်း ♦️
♦️ RC ( ၂ ) ထပ် အရောင်း ♦️ ♦️ S ( 989 ) ♦️ ပြည်ကြီးတံခွန် မြို့နယ် ♦️ ( ၅၄ x ၅၆ ) ကြား ♦️ ( အနော်ရထာ x အောင်ဇေယျ ) ကြား ♦️ ပေ ( ၃၀ x ၄၀ ) , အနောက်လှည့် ♦️ RC ( ၂ ) ထပ် , မူရင်းစလစ် ♦️သိန်း ( ၁၀၀၀ ) ( ညှိုနှိုင်း ) 💯 ...
♦️ ( ၅၄ ) လမ်းမကြီးအနီး အရောင်း ♦️ ♦️ S ( 988 ) ♦️ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် ♦️ ( အနော်ရထာ x ဘုရင့်နောင် ) ကြား ♦️ ပေ ( ၆၀ x ၄၀ ) , အနောက်လှည့် ♦️ RC ( ၂ ) ထပ် ♦️ သိန်း ( ၁၇၀၀ ) ( ညှိနှိုင်း ) 💯 ရွိုင်ရယ်ထွန်းသစ္စာ အိမ်ခြံမြေ 📞 09 20 60 ...
♦️ ငုရွှေဝါ ကွန်ဒို အရောင်း ♦️
♦️ ငုရွှေဝါ ကွန်ဒို အရောင်း ♦️ ♦️ S ( 871 ) ♦️ New Ocean အနီး , မန္တလာသီရိဘောလုံးကွင်း အနီး ♦️ ပေ ( ၄၀ x ၄၀ ) , ဂရန်ပါ ♦️ Master Room - ( 1 ) ခန်း , Single Room - (2)ခန်း ♦️ သိန်း ( ၂၈၀၀ ) ( ညှိုနှိုင်း ) 💯 ရွိုင်ရယ်ထွန်းသစ္စာ ...
♦️ အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ပီး ကွန်ဒို အရောင်း ♦️
♦️ အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ပီး ကွန်ဒို အရောင်း ♦️ ♦️ S ( 872 ) ♦️ ချမ်းမြသာစည် မြို့နယ် ♦️ New Ocean အနီး , မန္တလာသီရိ ဘောလုံးကွင်း အနီး ♦️ ပေ ( 40 x 40 ) , ဂရန်ပါ ♦️ Master Room - ( 1 ) ခန်း , Single Room - (2) ခန်း ♦️ သိန်း ( 3200 ) 💯 ...
LT1810005180: Landed house for sale in Hlaing Tharyar.
LT1810005180: Landed house for sale in Hlaing Tharyar. * Location - Hlaing Tharyar (FMI City) * Land size - 5,200 sq-ft (65x80) * 1 RC house * Living area - 3,500 sq-ft * 1 master bedroom *3single bedrooms * Living room + dining and kitchen * ...
~ Ready to Move ~ 【Followed by English message】 🔎 အိမ်ခြံမြေစာရင်းအမှတ် > ( RN - 12259 ) 🐣🐣 ရုံးခန်းလည်းဖွင့်လို့ရ မိသားစုတွေပဲ နေနေ အဆင်ပြေစေမည့် ရန်ကင်းမြို့နယ်က ၂ ထပ်တိုက်လုံးချင်းလေးပါရှင်။ နေရာ - ရန်ကင်း မြို့နယ် အဆောက်အဦးအမျိုးအစား - ...
🎉🎉** စမ်းချောင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ Mini Condo အရောင်း စာရင်းများ..**🎉🎉
🎉🎉** စမ်းချောင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ Mini Condo အရောင်း စာရင်းများ..**🎉🎉 1. ဝေဠုဝန်လမ်း ♦️ ပေ(18×63) ♦️ Hall ♦️ RCခင်း ♦️ Lift ♦️** ဈေးနှုန်း - သိန်း 850(ညှိနှိုင်း) **💰💰 ( CS-047200) -------------------------------------------- 2. ...
Check this url: https://www.lotayaproperty.com/property-for-sale?page=10